Ahoana no ahafahako manampy rakitra ho an'ny blaogiko vaovao?
Alohan'ny hitenenanao hoe ahoana no ampidirana ny rohy mankany amin'ny blôgy, avelao ny hahalala hoe iza amin'ireo rohy no tena zava-dehibe amin'ny tetikasa fitoraham-blainganao vao haingana. Raha ny fahitanao azy, raha mila ny blôginao ianao mba hanao tsara ny fitaovam-pitadiavana toa an'i Google sy Bing dia tsy maintsy manana ny backlinks tsara indrindra ianao. Mampiditra azy amin'ny teny Anglisy tsotra, misy fomba roa hafa hanampiana andalana ho an'ny blôgy. Ny rindrambaiko voalohany dia maneho ny rohy ambany misy lanjany, izay tsy manome ny fandrosoana ara-drariny ho an'ny blôginao. Etsy andaniny anefa, ny fiasa mafy amin'ny rohy voajanahary amin'ny tombon-tsoa ambony indrindra dia afaka manampy ny blôginao hampiditra ny habaka tanteraka amin'ny aterineto.
Raha ny tena izy, ny rindran-damina avo lenta dia ny mpamily fiarakodia indrindra amin'ny Google. Izany no antony hanomezako toro-hevitra sy tricks mila ilaina hampidirana ny bikàna tsara indrindra ao amin'ny blôginao ho an'ny fampisehoana tsara indrindra an-tserasera. Noho izany, etsy ambany isika dia hanomboka amin'ny famokarana maimaim-poana, bilaogy vahiny, ary koa ny fampiasana fitaovam-pampitam-baovao sosialy ho ana tanjona miteraka rohy.
Na efa nahomby ianao tamin'ny famahanam-bolongana nandritra ny fotoana fohy, na nanangana ny tetikasanao voalohany amin'ny aterineto - ny fomba tsara indrindra ahazoana fiovana goavana mahery vaika. Ny tanjona dia ny manome ny mpihaino ho votoatin'ny lahatsoratra amam-pihetseham-po sy sarobidy izay mety hahatonga mora kokoa amin'ny famokarana, ny rohy ary ny fitarihana.
Araho ireto soso-kevitra tsotra ireto mba hamoronana ny votoatin'ny blôginao ho an'ny tetikadin'ny tontolon'ny backlink:
manoratra momba ireo lohahevitra faramparany, vaovao sy mora azo mora hita mba hibahana amin'ny fitarihana sehatra media sosialy toy ny Twitter, Facebook, sns.
rehefa vita farany ny lohahevitra misy anao amin'izao fotoana izao, eritrereto ny amin'ny manaraka manaraka ny fanao tsara indrindra amin'ireo lahatsoratra ambony ao amin'ny Internet. Manoro hevitra aho hampiasa fitaovana maimaim-poana BuzzSumo mba hitady ny fironana ara-pirahalahiana manerantany;
mialoha ny famoahana ny sombin-taratasinao miverimberina, manontania tena raha toa ka mandresy izy raha ampitahaina amin'ny sisa amin'ireo lahatsoratra mifandraika indrindra amin'ny finday hita any amin'ny Internet.
Ny fiasana amin'ny hafatra an-tariby dia ny fomba tsara indrindra hampidirana loharano voajanahary amin'ny bilaogy. Ny famahanam-bolongana an-tsarimihetsika dia mbola mandaitra kokoa noho ny tetikasa tanora amin'ny aterineto, satria izy no manome ny loharanon'ny mpanaraka mahatoky ary manao mari-pamantarana mazava momba ny toetran'ny mpanoratra sy ny "marika" ao amin'ny fiarahamonina misy azy. Mandritra izany fotoana izany, ny blaogy vahiny dia afaka manome anao ny ankamaroan'ny backlinks misy contexteurs, izay heverina ho toy ny zavatra 5 na 10 heny kokoa raha oharina amin'ny rohy hafa.
Fitaterana fampahalalam-baovao sosialy
Toa mahitsy sy hita ny fampiasana fampahalalam-baovao sosialy, saingy eto dia hanasongadiko ny teboka. Noho ny fampiasana ireo sehatra sosialy lehibe tahaka ny Facebook, ny Twitter, Pinterest, LinkedIn, ary ny Google Plus no tena mora sy haingana indrindra hahazoana bakalorea goavana amin'ny bilaogy - saika tsy misy fotoana. Ny ilainao dia ny fampiasanao ny mombamomba anao manokana amin'ny sehatra tsirairay mba hamenoana ny fizarana bio miaraka amin'ny backlink izay manondro ny pejy blôginao. Tadidio fa ny rohy ara-tsosialy toy izany dia nahazo lanjany tena mety ho an'ny milina fikarohana. Noho izany, tsara kokoa ny mampiditra fotoana vitsivitsy amin'ny fananganana ny fisian'ny aterineto misy anao sy ny backlinks matanjaka ao amin'ny media sosialy, ka hahazo toerana ambony ao amin'ny valin'ny fikarohana Google amin'ny fotoana mitovy Source .